Iintlanzi ziphazanyiswa yingxolo | Ngeentlanzi
Iintlanzi ziphazanyiswa yingxolo
Ngokuphathelele iintlanzi, ayizizo zonke izinto ezithethwayo okanye ezifumanekileyo okwangoku. Uphononongo lwakutsha nje olwenziwe ngooNzululwazi be KwiYunivesithi yaseBristol e-UK ibonisa ukuba Ukuziphatha kwentlanzi kutshintshwa yingxolo kwaye inokutshintsha indawo yokuhlala i-aquarium kunye nokuziphatha kwayo, ngakumbi ngokutya kwaye ibe neziphumo zexesha elide.
Ezi nzululwazi zokwenza uvavanyo Izithethi zangaphantsi kwamanzi kwi-aquarium eneentlanzi. Xa kwakukhutshwa ingxolo enkulu, njengengxolo efana nezikhephe zolonwabo, baqaphela ukuba iintlanzi zaziphazanyiswa ngamaxesha okutya. Iintlanzi aziyeki ukutya, kodwa zenza iimpazamo zokondla, ezinje ngokutya intsalela etankini endaweni yokutya, kwanengxolo engapheliyo yemizuzwana nje.
Olu pho nonongo luye lwaqhubela phambili, kwaye kuqikelelwa ukuba iintlanzi nazo ukulahlekelwa kukuva kunye noxinzelelo oluphezulu ekhokelela ekuziphatheni okungalunganga. Nangona olu vavanyo lwenziwa kwi-aquarium, izazinzulu zabonisa inkxalabo yazo kuba ukuba iintlanzi, kulwandle oluvulekileyo, ziphazanyiswa yingxolo yokondla kwazo, zithande ukwenza impazamo ekutyiseni ezinye iintlobo zenkunkuma ulwandle.
Kuyinyani ukuba ayizizo zonke iintlanzi ezisabela ngokufanayo, kuxhomekeke kuhlobo abalothusayo ngengxolo okanye hayi. Kuba kukho iintlanzi eziphantse ukuba ziinkqubo zokuva azinakuphuhliswa kwaye azizizithulu. Yiyo loo nto benxibelelana ngezandi ezinamaxesha asezantsi njengokucofa, ukubhuza, ukubhomboloza kunye nokuduma kwabantu abafuna izixhobo ezizodwa ukuze bazive.
Ke ngoko Abemi be-aquarium bahlala ngokuvisisana thintela ukungcangcazela okuphezulu, kunye nokuthintela ukuba ne-aquarium kufutshane kunyeizixhobo zomculo okanye zikamabonwakude njengoko inokuhlala yoyikisa iintlanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Iintlanzi ziphazanyiswa yingxolo